🚀 सबैका लागि Bitcoin Mining! | Crowd-Mining.io
14 दिन Free Mining
सबैका लागि Bitcoin Mining!
यो सुपर सरल छ - तपाईंको सर्भर पहिले नै सेट अप र चलिरहेको छ। अब तपाईंको खाता सिर्जना गर्नुहोस्। र आफ्नो पहिलो Bitcoins पाउन। बस हाम्रो Bitcoin cloud mining service प्रयोग!
हामी के को लागि खडा।
Crowd-Mining.io अद्वितीय बनाउँछ के पत्ता लगाउनुहोस्।
Bitcoin mining स्रोत-गहन र कठिन हुन डिजाइन गरिएको छ। Miners फेला ब्लक संख्या स्थिर रहन्छ। सर्भर एक ब्लक, यो एक शेयर Bitcoins को संग पुरस्कार नै discovers पछि। हाल यस शेयर 25 Bitcoins छ।
हामी हाम्रो लगानीकर्ताले हाम्रो व्यापार लगानी गर्न मौका दिनुहोस्। र माथि वर्णन प्रणालीमा आधारित, तपाईं दैनिक लाभ पाउन। यसबाहेक, लगानीकर्ताले हाम्रो Daily-Mining-Newsletter संग जानकारी छन्।
एक ब्लक हेडर को SHA-256 hash भन्दा कम वा बराबर लक्षित हुनुपर्छ किनभने Bitcoin Mining एक ब्लक गाह्रो छ। यो समस्या व्याख्या उद्देश्यका लागि सरलीकृत गर्न सकिन्छ: एक ब्लक को Hash zeros को एक निश्चित संख्या सुरु गर्नुपर्छ। धेरै zeros साथ सुरु हुन्छ एक ह्यास गणना को सम्भावना धेरै कम छ।
माथि उल्लेख रूपमा, एकल गणना एक विशाल गणितीय प्रयास खपत। त्यसैले, यो अप सर्भर संग मिति रहन आवश्यक छ। हामी नयाँ जारी Bitcoin ASIC मिसिन मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। ठूलो भागीदारी धन्यवाद, हामी नयाँ सर्भर मा सबै भन्दा राम्रो मूल्यहरु प्राप्त।
हाम्रो विकास टोलीलाई धन्यवाद, हामी गर्व हामी नवीन हाम्रो ग्राहकहरु लागि जारी वेब-ड्यासबोर्ड छ भनेर घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मा तिनीहरूले Daily Mining परिणाम समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। र को पाठ्यक्रम अर्को सम्झौता खरीद।
म मेरो इमेल भण्डारण गर्न सकिन्छ कि, मेरो सहमति दिन।